Masuul Sare Oo Iska Casilay Xisbiga Waddani | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Hargaysa (SDWO): Wasiirkii wasaaradda Macdanta iyo Biyaha ee xukuumadda UDUB Cismaan Cabdi Maxamed, ayaa ku dhawaaqay in uu isaga baxay xisbiga mucaaridka ah ee Waddani oo uu dhawrkii sanadood u danbeeyay ka tirsanaa.
Cisman Cabdi Maxamed, waxa uu sheegay in sababta ku kaliftay in uu ka baxo xisbiga WADDANI isagoo saluugay gebi ahaanba siyaasadda xisbigaasi, kuwaasi oo ay ka mid yihiin in aanu guddoomiye Cirro si cadaalad ah jagooyinka ugu qaybin xubnaha xisbiga ee goboladda dalka.
Wasiirkii hore ee wasaaradda biyaha xukuumadii Rayaale oo ka soo jeedda gobolka Awdal, oo maanta warbaahinta kula hadlay magaaladda Hargaysa, ayaa tilmaamay in arrimaha uu ku saluugay siyaasadda Waddani ay ka mid tahay 32 xoghaye oo uu dhawaan guddoomiye Cirro magacaabay uu gobolka Awdal kaga soo daray 3 xubnood oo keliya.
Cisman Cabdi, oo ka hadlayay is casilaadiisa iyo waxa ku kalifay waxa uu yidhi “Waxaan halkan si rasmiya uga shaacinayaa in aan gebi ahaanba xisbiga Waddani ka baxay. waxaan saluugay qaabka hab maamulka siyaasadeed ee xisbigaasi.
Saluug badan ayaan siyaasadda Waddani ku arkay, laga soo bilaabo shirkii golaha dhexe ee musharaxiinta madaxweynaha iyo ku-xigeenka, iyo arrinta labaad oo ah 32 xoghaye oo uu dhawaan magacaabay guddoomiyaha xisbiga C/raxmaan Cirro, iyadoo gobolka Awdal oo aan anigu ka soo jeedo uu ka siiyay 3 xubnood”.
Waxa kale oo uu sheegay in uu dhawaan cadayn doono xisbiga kale ee uu ku biirayo iyo sidoo kale waxyaabo badan oo uu ku sharaxi doono siyaasad xumadda ka dhex jirta xisbiga Wadddani.
“Wakhti dhaw ayaan si faahfaahsan uga hadli doonaa xisbiga kale ee aan ku biirayo, isla markaana si tafaftiran uga hadli doona waxyaabo badan oo ka mid ah guud ahaanba arrimaha aan ku saluugay xisbiga Waddani”ayuu yidhi Cismaan Cabdi Xasan.